Sina: Torolàlan’ny sivana tamin’ny Janoary 2011 · Global Voices teny Malagasy
Sina: Torolàlan'ny sivana tamin'ny Janoary 2011
Voadika ny 13 Febroary 2011 6:50 GMT
Any Sina, ireo torolàlana mikasika ny fanivanana dia avoakan'ireo manam-pahefana maro ao amin'ny Fitondrana sy ny CCP. Nanao dikanteny torolàlana maro nivoaka tamin'ny Janoary 2011 ny China Digital Times mba hanehoana ny fampiharana ny fanivanana any Sina.
Ireo torolàlana nofidiana ireo dia navoakan'ny Biraon'ny Filankevi-pirenena mikasika ny Fampahalalam-baovao, ny Minisiteran'ny Filaminam-bahoaka, ny Birao foiben'ny fampielezan-kevitry ny CCP, ny Birao mpiandraikitra ny Fanaraha-maso ny Aterineto, Ny Biraom-paritry ny fampielezan-kevitra. Tahaka ny fanazavan'ny CDT:
Any Sina, maro ireo vondrona politika miandraikitra ny fanaraha-maso ny aterineto. Amin'ny avo indrindra no misy ny Antokon-draharaha foiben'ny Fampielezan-kevitra, izay miantoka ny fampanarahana ny lalàna ofisialy nomen'ny CCP an'ireo media sy ny votoaty ara-kolotsaina. Avy eo misy ny Biraon'ny Filankevi-pirenena mikasika ny Fampahalalam-baovao (SCIO), izay nametraka ny “Biraon'ny Raharahan'ny Aterineto” mba hanaraha-maso ireo vohikala rehetra izay mamoaka vaovao, ao anatin'izany ny vohikala ofisialin'ireo fikambanana mpampiely vaovao sy ireo vohikala tsy miankina mamoaka vaovao.
Ity “Biraon'ny Raharahan'ny Aterineto ity” dia namoaka fepetra henjana ho an'ireo vohikala mamoaka vaovao isanandro, ary matetika im-betsaka isanandro. Tsy voatery midika akory izany fa voasakan'ireny torolàlana ireny tanteraka ao amin'ny aterineto ireo votoaty mifandraika amin'izany, fa mampianatra ireo vohikala hanazava na hamafa karazana hevitra sasany na fampahalalam-baovao tena amin'ny antsipirihany.
Tahaka ilay fikomian'ny taona 2011 tany Ejypta, nandrahona hanakatona ireo vohikala izay tsy ampy fanaraha-maso ireo manam-pahefana ara-panjakana:
Korontana any Ejypta
28 Janoary, 2011
Avy amin'ny Biraon'ny Filankevi-pirenena mikasika ny Fampahalalam-baovao sy ny Birao 11-n'ny Minisiteran'ny Filaminam-bahoaka:
Mikasika irtany Ejypta, tsy maintsy mampiasa ireo vaovao avy amin'ny Xinhua ny media manerana ny firenena. Tokony hanamafy [ny fanaraha-maso] ireo lahatsoratra, sehatra fiadian-kevitra, bilaogy, ary indrindra ireo lahatsoratra amin'ny bilaogy kiritika. Ireo Biraonay dia voatery hanakatona ny vohikala tsy ampy fanaraha-maso.
Raha te-hahalala bebe kokoa dia tsidiho ny China Digital Times.